Hadda waxaa laga heli karaa Apple Arcade: Alto`s Odyssey: Magaalada Lumay, Shimbiraha careysan: Dib loo soo rogay iyo Doodle God Universe | Wararka IPhone
Bishii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida Apple u go'aansaday inuu ku daro barnaamijkiisa ku saabsan rukunka Apple Arcade, dhowr ciyaarood oo horeyba u jiray waxaa laga heli karaa App Store laakiin baabi'inta wax ku iibsiga barnaamijka iyo waliba xayeysiiska.
Shimbiraha careysan: Dib ayaa loo cusbooneysiiyay y Alto Odyssey: Magaalada Lumay waa laba tusaale oo cad oo dhaqdhaqaaqan ah, ciyaaro horeyba looga heli jiray Apple Arcade illaa iyo bishii Luulyo ee la soo dhaafay 16 kii oo aan ku darno Fruit Ninja +, INKS +, Leo's Fortune +, Jetpack Joyride +, Super Stickman Golf 3 +Cinwaannadan sidoo kale waa inaan ku darnaa mid cusub: Doodle God Universe.
1 Alto Odyssey: Magaalada Lumay
2 Shimbiraha careysan ayaa dib loo cusbooneysiiyay
3 Doodle ilaah caalam
Alto Odyssey: Magaalada Lumay
Marka hore wuxuu ahaa Tartankii Alto ee 2015. Kadib waxaa yimid Alto's Odyssey, oo lagu soo bandhigay macruufka dib u soo celinta 2018. Cayaartu waxay ka kooban tahay boodhadh ciideed iyada oo loo marayo meelo qalaad oo isku dhafan boodboodka derbiga, buuqyada buufin iyo farsamoyaqaannada kale.
In sharaxaadda cinwaankan cusub, waxaan ka akhrisan karnaa "Ku soo biir Alto iyo saaxiibbadiis safar aan dhammaad lahayn oo dhex socda ciida adoo wata waxyaabo cusub oo sahamin iyo farsamooyin lagu ogaanayo."
Shimbiraha careysan ayaa dib loo cusbooneysiiyay
Adhiga caanka ah ee Shimbiraha Xanaaqsan wuxuu ku soo laabanayaa nooc dib loo cusbooneysiiyey taas waxaa ku jira jilayaal cusub oo midabo badan leh. Ciyaartu waa isku mid, halkaas oo ay tahay inaan u isticmaalno dhalo si loo toogto shimbiraha xanaaqa badan. Dabcan, shimbiro cusub, doofaarro cusub iyo qaab ciyaareed cusub ayaa lagu soo daray, kaas oo gorgorradu u geystaan ​​burburka heerar cusub oo taxane ah.
Doodle ilaah caalam
Doodle God waa ciyaar dhisme adduun oo ka kooban isku-darka iyo isku-dhafka isku-darka dabka, dhulka, dabaysha iyo hawada abuur adduunyo. Waxaan ku bilaabaynaa sheybaarista, waxaan ku sii wadaynaa xoolaha iyo ugu dambeyntii dadka.
Si aad ugu raaxeysan karto cinwaannadan oo dhan, sida kaliya ee lagu sameyn karaa waa adiga oo shaqaalaysiiya shirkadda Apple Arcade, oo ah madal qiimeheedu yahay 4,99 yuuro bishii iyo in xilliyada xagaaga ay yihiin xulasho aad u wanaagsan in la tixgeliyo hadaan caruur yar leenahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Hadda waxaa laga heli karaa Apple Arcade: Alto`s Odyssey: Magaalada lumay, Shimbiraha careysan: Dib loo soo rogay iyo Doodle God Universe